Kooxda ‘Real IRA’ oo lagu eedeeyey weerarkii bambaano ee Waqooyiga Ireland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Kooxda ‘Real IRA’ oo lagu eedeeyey weerarkii bambaano ee Waqooyiga Ireland
Qaraxan loo adeegsaday gaari bambaano lasoo saaray ayaa habeenimadii Sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Derry oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobalka Waqooyiga-Ireland.
Weerarkan ayeysan cidna ku dhaawacmin balse waxaa la sheegay inuu ahaa mid halis ah oo xoog badnaa, kooxda falkan ka danbeysay ayaa daqiiqado kahor qaraxa intuusan dhicin booliiska u sheegay in ay geysan doonaan qarax. Kooxdan ayaa gaariga hordhigay xarunta Maxkamada magaaladaasi.
Booliiska ayaa sheegay inay Axadii shalay qabteen labo qof oo la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkan oo la sheegayo inay ka danbeyso kooxda Real IRA oo horey uga goosatay kooxda IRA ee u dagaalami jirtay gooni isu-taaga gobalka Waqooyiga Ireland oo weli ka tirsan dhulka ay maamusho dowlada UK.
Waqooyiga-Ireland ayaa kamid ah goobaha sida weyn looga taageersan yahay in dalka UK uu kasii mid ahaado Midowga Yurub, qodobada ugu waaweyn oo ay hada caqabada ka taagan tahay mashruuca Brexit ayaa ah qaabka loo maareyn doono xaduuda la dhex dhigi doono Waqooyiga-Ireland iyo dalka Ireland oo isagu kamid ah EU-da.